Nserahwɛfo Nye Nserahwɛ: Jehovah Adasefo Edwumayɛbea A Ɔwɔ Cameroon
Edwumayɛbea Nye Nserahwɛ Ho Nsɛm
Yɛdze enyigye to nsa frɛ wo dɛ bra bɔhwɛ hɛn edwumayɛbea nye tsintsimbea ahorow. Hwehwɛ mbea a wɔwowɔ nye mber a ibotum dze abɛsera hɔ.
Coronavirus (COVID-19) Ho Nkaabɔ: Wɔ aman ahorow pii mu no, yeetwa nserahwɛ a ɔkɔ do wɔ hɛn edwumayɛbea nkorbata ahorow mu no mu. Sɛ epɛ iyi ho nsɛm pii a, yɛserɛ wo bisa edwumayɛbea nkorbata a epɛ dɛ ekɔ nserahwɛ wɔ hɔ no.
Kyerɛ Bea a Erohwehwɛ Albania Angola Argentina Armenia Australia Belgium Benin Bolivia Brazil Britain Bulgaria Burundi Cameroon Canada Central African Republic Chile Colombia Congo (Kinshasa) Côte d’Ivoire Croatia Cuba Denmark Dominican Republic Ecuador Ethiopia Fiji Finland France Georgia Germany Ghana Greece Guam Haiti Hong Kong Hungary India Indonesia Israel Italy Japan Kazakhstan Kenya Korea Kyrgyzstan Liberia Madagascar Malawi Malta Mexico Moldova Mozambique Myanmar Netherlands New Caledonia Nigeria North Macedonia Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Rwanda Senegal Serbia Slovakia Slovenia Solomon Islands South Africa Spain Sri Lanka Suriname Tahiti Taiwan Thailand Trinidad and Tobago Uganda Ukraine United States Venezuela Zambia Zimbabwe
Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ
Aso ɔsɛ dɛ idzi kan kã kyerɛ hɛn ansaana aba nserahwɛ? Nyew. Sɛ nyimpa a wɔreba nserahwɛ no dɔɔ sõ o, wɔnndɔɔ sõ o, yɛserɛ dɛ hom ndzi kan mbɔ hɛn amandzɛɛ ansaana hom aba nserahwɛ. Iyi remma ahokyer mmba ha osian nyimpadɔm a wɔbɛba ebegu ha no ntsi, na woara so w’enyiwa aagye wɔ wo nserahwɛ no mu. Dzi kan bɔ hɛn amandzɛɛ aber a wɔaka dapɛn kor anaa dza ɔbor dɛm ma aaba nserahwɛ no. Sɛ da a edze bɛba nserahwɛ no yɛ dapɔnda a, ɔnodze yɛhyɛ wo nkuran dɛ kã kyerɛ hɛn ntsɛm koraa ana ber no aasõ.
Sɛ enndzi kan ammbɔ hɛn amandzɛɛ na sɛ eba a, ana ibotum akɔ nserahwɛ no? Sɛ enndzi kan ammbɔ hɛn amandzɛɛ na sɛ eba a, ɔbɛyɛ dzen dɛ yɛnye wo bɔkɔ nserahwɛ no. Beebi a yɛgye ahɔho no nnsõ ahen biara, ntsi wɔ da kor biara no, yɛwɔ nyimpa dodow bi a yebotum nye hɔn akɔ nserahwɛ.
Ebɛn aber na ɔsɛ dɛ edu ha? Sɛ ibotum ahyɛ aprɔwbɔ no ase wɔ ber ano a, yɛserɛ dɛ bɔ mbɔdzen du ha annyɛ yie koraa no minitsi 10 ansaana ber a ekãa dɛ edze bɛba no asõ.
Ebɛyɛ dɛn abɔ hɛn amandzɛɛ dɛ ereba nserahwɛ? Klek ɔfã a wɔato dzin “Mepɛ Dɛ Meyɛ Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ” no do.
Sɛ eyɛ nhyehyɛɛ no wie a, ibotum asesa no anaadɛ etwa mu a? Nyew. Klek ɔfã a wɔato dzin “Mepɛ Dɛ Mesesa Me Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ” no do.
Da a nkyɛ epɛ dɛ eba nserahwɛ no, sɛ kwan no nyinara ayɛ mã so ɛ? Ofi ber to ber no, ɔyɛ a san hwɛ. Sɛ binom sesa hɔn nserahwɛ ho nhyehyɛɛ anaa wotwa mu a, kwan tum bɛda hɔ.
Mepɛ Dɛ Meyɛ Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ
Mepɛ Dɛ Mesesa Me Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ
Dza Wɔyɛ Tsitsir
Wɔhwɛ Jehovah Adasefo bɔbor 50,000 a wɔwɔ Cameroon, Gabon nye Equatorial Guinea hɔn dwumadzi ahorow do. Wɔdze nwoma nye dza ɔkã ho mona Africa aman ahorow enum.
Twe Nserahwɛ Nwomaba No Bi
Fa mona Fa mona Edwumayɛbea Ahorow Nye Nserahwɛ: Cameroon
Edwumayɛbea Ahorow Nye Nserahwɛ: Cameroon